ह्यारी पोटरको बुलेट बाइक म्युजियममा
ह्यारी पोटर नहेर्नेहरु सायदै होलान् । यो सिनेमा हेर्नेहरु त्यसमा प्रयोग भएको बुलेट वाइकमा पनि लोभिएका होलान् । त्यही वाइक अहिले लिभरपुलको एक संग्राहलयमा प्रदर्शनमा राखिएको छ । उक्त वाइकलाई अइकनिक मोटरसाइकल कम्पनी रोयल इन्फिल्डले बनाएको थियो । यस वाइक...
यस्तो कार जसलाई कसैले खरिद गर्न पाउदैनन्
विश्वभर हुने मोटर शोमा केहि यस्ता कन्सेप्ट कार प्रदर्शन गरिन्छ, जो कहिल्यै वजारमा उतारिदैन । केहि महिना अघि पेरिसमा सञ्चालित मोटर शो यसको अपवाद हुने कुरै भएन । त्यहाँपनि केहि कन्सेप्ट कारले आगन्तुकको ध्यान खिचेको थियो । जिज्ञासा उठ्न सक्छ कि, त्यस्तो...
विश्वको सवैभन्दा ठूलो ट्रक
अजव–गजव प्रसंग ३ के तपाईले यस्तो ट्रकको कल्पना गर्नुभएको छ ? जो तपाईको घरभन्दा ठूलो हुन्छ । जसको टायरको आकार मात्र पनि यति ठूलो छ कि, त्यसको सामु जस्तै अग्लो मान्छे पनि पुड्को देखिन्छ । जुन ट्रकमा चढ्नका लागि सिंढीको प्रयोग गर्नुपर्छ । यो पढेर सायद त...
धर्तीवाट चन्द्रमा गाडी !
अजब–गजब प्रसंग – २ धर्तीवाट चन्द्रमा गाडी – नेपालमा पूर्व–पश्चिमको दुरी छिचोल्न धेरैमा दुइ दिन लाग्न सक्छ । प्राय रात्रीकालिन चल्ने गाडीहरु दुई दिनमै गन्तव्यमा पुग्छन् । यदि चन्द्रमावाट पृथ्वीमा गाडी आउनुपर्‍यो भने कति समय लाग्ला रु यसको हिसाव निकालि...
यस्तो भ्यानिटी भ्यान चढ्छन् शाहरुख
बलिउड वादशाह शाहरुख खान अक्सर आफ्नो लक्जरी लाइफस्टाइलको लागि चर्चामा रहन्छन् । कहिले उनी आलिशान घरको लागि त कहिले लक्जरी कारको लागि चर्चाको केन्द्रमा रहने गर्छन् । यसपाली पनि उसैगरी यि वादशाहको चर्चा गरिदैछ, लक्जरी भेनिटी भ्यानको कारण । शाहरुखका लागि...
अटोमोवाइलका अजव–गजव प्रसंग
विश्वमा यस्ता अजव– गजब कुरा छन्, जसको सम्वन्धमा हामी अनभिज्ञ छौ । अत: यहाँ उठान गर्न लागिएको प्रसंग जति अनौठो छ, उत्तिनै रोचक पनि । त्यसो त रोचक तथ्य हरेक कुरामा जोडिएको हुन्छ । तर, यहाँ कार र अटोमोवाइलसँग सम्वन्धित रोचक प्रसंग उप्काइदैछ । पहिलो पटक...
ढल्कियो उमेर गाडी नचढी
विराटनगर – मोरङ बयरवन–६ का लरबरे माझीको घर अगाडिबाटै गाडी जान्छ । तर उनी अहिलेसम्म गाडी चढेका छैनन् । ८४ वर्ष पुगेका माझी गाडी नभेटेर नचढेका होइनन् । उनी कतै जानु परे पैदल मात्र हिड्छन् । गाडीको सहारा कहिल्यै लिदैनन् । ‘धरान–विराटनगर हिँडेरै पुग्छु ।...
घर भित्रै हाइवे
जापानको ओसाकामा रहेको गेट टावर भवन एक उत्सुकतापुर्वक हेर्न लायक भवन हो । १६ तले सो भवनको पाचौ छैठौ र सातौ तल्लाबाट एक उच्च गतिको हाइवे रहेको छ । भवनको चौथो तल्लाबाट सिधै आठौ तल्लामा जाने लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ । यो आफैमा आकर्षक छ, तर यसको निर्माणक...
एजेन्सी – १ सय बर्ष पछि कस्तो कार बन्ला ? यो धेरैका लागि चासो हुनसक्छ । धेरैले अनुमान मात्र लगाउन सक्छन् । तर प्रसिद्ध कार कम्पनी रोल्स रोयसले १ सय बर्ष पछिको कारको नमूना नै प्रस्तुत गरेको छ । रोल्स रोयसले आफ्नो ‘भिजन नेक्स्ट १००’ कार प्रस्तुत...
मस्कोको केबुल ब्रिज
झिवोपिस्नी ब्रिज रसियाको राजधानी मस्कोको उत्तर पश्चिमी भागमा रहेको मस्कोभा नदीमा अवस्थित छ । सन् २००७ को डिसेम्बर २७ देखि प्रयोगमा आएको यो पुल मस्कोको पहिलो केबुलमा आधारित पुल हो । यो क्रास्नोप्रेनेस्की एभेन्युको एउटा भाग हो । यो पुल केबुल जोडिएको यु...
रोनाल्डोको कार विक्री गर्ने भएपछि
फुटवल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटवलका जति सौखिन छन्, उत्तिनै विलासी कारको पनि । उनको कलेक्सनमा यस्ता केहि कार छन्, जो निकै महंगो हुनका साथै निकै सानदार पनि । पोर्चुगलका यी ‘गोल मेसिन’ अहिले तिनै कारको कारण चर्चामा छन् । हालै मात्र रोनाल्डोले आफुस...
एजेन्सी – यो खुट्टाले चलाइने एक प्रकारको रोलर कोस्टर हो । राइडरले खुट्टाको पैतालाले यसलाई चलाउन सक्छन् । पहाडी भागमा बनाइएको उक्त रोलर कोस्टरमा दुईवटा ठडिएका रेल छन् । यसमा चढ्दा वास्तबिक साइकल चढेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । जमिन भन्दा यो चार तला माथि ब...
राजमार्गमा गिद्ध बढ्दै
नेपाल पक्षी संरक्षण संघ (बिसिएन) को भर्खरै सम्पन्न अध्ययनले नेपालमा गिद्धको संख्या राजमार्गमा बढ्दै गएको देखाएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको ५ सय ६० किलोमिटर राजमार्गमा गरिएको अध्ययनबाट ७४ गिद्ध फेला परेक...
कारको सिटमा बस्दा प्रतिघण्टा २० डलर पाइने
एजेन्सी – गुगल कारको सिटमा एक घण्टा बस्ने हो भने २० डलर पाइने भएको छ । सेल्फ ड्राइभिङ कार परीक्षण गरिरहेको गुगलले यस्तो अफर सार्वजनिक गरेको हो । गुगलसँग १२ महिना वा २४ महिनाका लागि सम्झौता गर्नु पर्नेछ । गुगलको सेल्फ ड्राइभिङ कारको प्रविधि परीक्षण गर...
भारतीय राष्ट्रपतिको गाडी : हतियारदेखि क्यामेरासम्म
नेताहरुको विलासी जीवनशैलीवारे चर्चा मात्र हुदैन, सर्वसाधारणमा जिज्ञासा पनि उत्तिकै हुने गर्छ । भारतीय नेताहरु यस विषयमा अछुतो रहने कुरै भएन । प्रसंग हो, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी र उनी सवार हुने विलासी वुलेटप्रुफ गाडीको । हुन त भिभिआइपीहरुलाई उच्च स...
जर्मनीको बियर बाइक
जर्मनीमा बियर निकै लोकप्रिय छ । जर्मन नागरिकहरु बियर बिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर एक जर्मन कम्पनीले बियर बाइकको निर्माण गरेको छ । यसमा एक साथ १६ ब्यक्ति बस्न सक्छन् । दुवैतिर बस्ने सिट हुन्छ र बीचमा ठुलो टेबुल हन्छ...
टुक टुक पोलो
हामीले हर्स पोलो, वाटर पोलो, स्नो हर्स पोलो, साइकल पोलो वा एलिफेन्ट पोलो आदि त सुनेकै थियौ । तर के तपाइलाई थाहा छ टुक टुक पोलो पनि छ भनेर ? हो, तीन पांग्रे सवारी साधन अर्थात अटोमा बसेर खेलिने खेल हो टुक टुक पोलो । श्रीलंकाको गेलमा यो खेल आयोजन...
चीनमा सेलफोन लेन
मोबाइल फोन बोक्दै र कुरा गर्दै हिड्नु धेरैका लागि सामान्य भैसकेको छ । हिड्दा हिड्दै टेक्स्ट म्यासेज गर्ने क्रम पनि संसारमै प्रचलित छ । तर सडक छेउमा हिड्दै गर्दा टेक्स्ट म्यासेज पठाउन थाले के होला ? सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो कार्य पनि खतरनाक नै छ । यद्...
अटोस्टाड – भक्सवागनको आकर्षण
जर्मनीको वल्फस्बर्गमा रहेको भक्सवागन कारखानासँगै रहेका विभिन्न आकर्षक स्थानलाई अटोस्टाड भनिन्छ । यहाँ म्युजियम र भक्सवागन ग्रुपका विभिन्न अटोमोबाइल ब्रान्डका प्याभिलियन समेत रहेका छन् । यहाँ भएको कस्टमर सेन्टरबाट ग्राहकले कारखानाका विभिन्न स्थानमा घु...
वृत्ताकार साइकल पथ
हल्यान्डबासी अर्थात डचहरुका लागि साइकल नै रोजाइको सवारी साधन हो । एक अनुमान अनुसार दैनिक १ करोड ४० लाख साइकल सवारीका रुपमा प्रयोग हुन्छन् । त्यसैले नै यहा साइकलका लगि छुट्टै सडक अर्थात बाइसाइकल पथ छन् । सडक निर्माण गर्दा नै साइकल ट्राफिक र सेफ्टीलाई...
कारमा लिंगको चित्र
सवारी साधनहरुमा बुगाटी कारको आकर्षण धेरै नै छ । यो आकर्षक डिजाइनका कारणले मात्र नभएर यसको मुल्यको कारणले पनि हुने गरेको छ । तिब्र गतिमा सडकमा गुड्ने कारको उपाधि पाएको बुगाटी भेरोन कारको बजार मुल्य २३ करोड २८ लाख रुपैंया पर्छ । यस्तो महंगो कार अमेरिका...